Ny roller roller nylon koa dia be mpampiasa. Pulley no ampiasaina na aiza na aiza misy tariby vy. Ny pulley mahazatra dia vita amin'ny vy vy, vy vy ary fitaovana hafa. Ny pulley vy dia mamono ny tariby, misy akony lehibe amin'ny ain'ny tariby lafo vidy ary mandrahona ny fampiasana azo antoka ireo fitaovana. Ny fampiasana fitaovam-pianarana nylon hanamboarana pulley dia ny hamahana tsara ireo drawbacks tena sarotra amin'ny pulley vy ary mivoatra sy mihatra
Ny torolàlana nylon dia ampiharina amin'ny gourd eropeana, izay ampahany amin'ny crane, ary nylon guider dia apetraka amin'ny roul ho an'ny tontolo iainana miasa kokoa, ary afaka miaro tady tariby amin'ny akanjo be loatra izy io, manitatra ny androm-piainana, mampihena ny fifandirana eo amin'ny tady tariby sy faritra vy. Efa ho ny 90% ny tanety eoropeanina izao no mampifanaraka ny guiler nylon amin'ny tombony azo tsy azo soloina.
Ny lambam-pandriana nylon dia ampiasaina hampifandraisana bara roa (zana-kazo sy zotram-pitaterana) amin'ny rafitra samihafa mba hahafahan'izy ireo mihodina miaraka mamindra ireo faritra mekanika manjavozavo. Ao amin'ny fampitana herinaratra haingam-pandeha haingam-pandeha sy mavesatra be dia be koa ny fampifangaroana sasany, ny fampihenana ary ny fanatsarana ny fahombiazan'ny shafting.
Nylon slider dia ampiharina betsaka amin'ny crane camion, ary azo amboarina amin'ny habe, endrika, mba hahatratrarana ny fitakiana crane an'ny kamio.
Ny toerana famokarana ny pin nylon dia ao anaty kirihitra. Ny tsimatra nylon dia ampiasaina amin'ny fikarakarana lasitra mitambatra. Raha ampitahaina amin'ny tsimatra vy dia mora simba ny pin nylon, izay miantoka fa tsy simba ny bobongolo saro-takarina. Noho izany, inoana fa ny fampiasana ireny pin nylon ireny dia hampihena be ny tahan'ny bobongolo.